कोभ्याक्सिनको ट्रायलमा समावेश भएका व्यक्तिको मृत्यु, के भन्छ बायोटक ? « Pen Nepal
कोभ्याक्सिनको ट्रायलमा समावेश भएका व्यक्तिको मृत्यु, के भन्छ बायोटक ?
Published On : 10 January, 2021 8:06 am By : पेननेपाल
एजेन्सी । भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन विवादबाट अछुतो हुन सकेको छैन । भोपालमा कोभ्याक्सिनको ट्रायलमा समावेश ४७ वर्षका एक पुरुषको संदिग्ध मृत्युको खबर सार्वजनिक भएको छ । दीप मरावी १२ डिसेम्बरमा कोभ्याक्सिनको ट्रायलमा समावेश भएका थिए । भ्याक्सिनको डोज लिएको ९ दिनपछि अर्थात् २१ डिसेम्बरमा उनको संदिग्ध मृत्यु भएको थियो ।
२२ डिसेम्बरमा शवको पोस्टमार्टम गर्दा उनको शरीरमा विष भेटिएको पुष्टि भयो । शुक्रबार यो खबर मिडियामा आएपछि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भए । भ्याक्सिनमाथि प्रश्न उठाउन थालियो तसर्थ शनिबार भारत बायोटेकले स्पष्टिकरण दियो । कम्पनीका अनुसार ती व्यक्तिलाई भ्याक्सिन ट्रायलको सबै नियम र शर्तबारे जानकारी दिइएको थियो । भ्याक्सिन दिएको ७ दिनसम्म उनको स्वास्थ्यबारे जानकारी पनि लिइएको थियो ।
कम्पनीले अरु के स्पष्टिकरण दियो ?
– ती व्यक्तिले तेस्रो चरणको ट्रायलको सबै मानक पूरा गरेका थिए ।
– डोज दिएको ७ दिनपछि ती व्यक्तिको लगातार निगरानी भयो । यसमा उनी पूर्ण रुपमा स्वस्थ पाइएका थिए ।
– ती व्यक्तिमा कुनै पनि प्रकारको साइड इफेक्ट देखिएको थिएन ।
– भोपालको गान्धि मेडिकल कलेजको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार मृत्युको कारण कार्डियोरेस्पिरेट्री फेलियर हुनसक्छ । यो शरीरमा विषका कारण हुनसक्छ ।
बेचैनीसहित उल्टी आउन सुरु भयोः
मृतक दिपकका छोरा आकाश मरावीले एक भारतीय मिडियासँगको कुराकानीमा १२ डिसेम्बरमा भ्याक्सिन लगाएपछि १९ डिसेम्बरमा उनका पिताका स्वास्थ्य स्थिती बिग्रिएको थियो । उनलाई अचानक डर लाग्ने, बेचैनी र बान्ता हुनेलगायत समस्या देखिन थालेको थियो । तर उनीहरुले यसलाई सामान्य समस्या ठानेर उपचार गराएनन् ।
दिपकका अनुसार डोज लगाएपछि उनका पिता मजदुरीमा जान बन्द गरेका थिए, उनी कोरोना प्रोटोकलको पालना गरिरहेका थिए । २१ डिसेम्बरमा जब उनको निधन भयो तब उनी घरमा एक्लै थिए । आमा कामका लागि बाहिर गएकी थिइन् र कान्छो भाइ बाहिर खेलिरहेका थिए । मृत्युको सूचना त्यसै दिन पिपल्स कलेजलाई पठाइएको र त्यसको भोलिपल्ट उनको अन्तिम संस्कार गरिएको उनले जानकारी दिए ।